१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको आयोजना पहिलो प्राथमिकता « News of Nepal
सदस्य सचिव, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्
शिक्षा क्षेत्रमा परिचित व्यक्तित्व रमेश सिलवाल विगत एक महीनादेखि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्य सचिवको कुर्सीमा हुनुहुन्छ । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष र गोल्डेनगेट इन्टरनेसनल कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका सिलवाल कार्यसूची बनाएर काममा लाग्नुभएको छ । क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) मा उपाध्यक्षका रुपमा पनि काम गरिसकेका सिलवालले क्रिकेट क्षेत्रको समस्या समाधानमा प्राथमिकता दिने अपेक्षा छ । १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदलाई समयमै सम्पन्न गर्ने चुनौती बोकेर आएका रमेश सिलवालसँग यसै विषयमा केन्द्रित रहेरनेपालसमाचारत्रका लागि कविरस शर्माले गरेको कुराकानी :
खेल क्षेत्रसँग नाता कसरी जोडियो ?
बाल्यकालदेखि नै खेलकुदप्रति मेरो लगाव थियो । मार्सल आर्ट्सबाहेक अन्य थुप्रै खेल मैले खेलेको छु र ज्ञान पनि छ । मार्सल आर्ट्स नखेले पनि म नेपालमा आईटीएफको संस्थापक हुँ जसका कारण आईटीएफले मलाई मानार्थ थ्री डानसमेत प्रदान गरेको छ । खेलकुदमा मैले केही योगदान पु¥याएकोले नै होला सरकारले मलाई यस्तो सम्मान दिएको ।
वास्तवमा म आफूलाई खेल म्यानेजर भन्न रुचाउँछु । खेलकुदबाट राष्ट्रिय गौरव र इज्जत प्राप्त हुन्छ, देशको श्रीवृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमान बढाउन सकिन्छ । म यसमै केन्द्रित छु । यस पदमा नबस्दा पनि मैले निरन्तर रुपमा नेपाली खेलकुदमा योगदान पुर्याउँदै आएको थिएँ । धेरै खेलाडी र प्रशिक्षक उत्पादन गर्ने विषयमा एउटा कोणबाट मेरो नाम पनि जोडिन्छ । मेरो नियुक्तिलार्य मैले मेरो मात्र नभएर खेल क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने समस्त व्यक्तिहरुको सम्मानको रुपमा लिएको छु ।
राखेपमा तपाईंको पहिलो प्राथमिकता के हुनेछ ?
अहिलको अवस्थामा मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने नै हो । म अहिले त्यसैमा केन्द्रित छु ।
तपाईंको चार वर्षे कार्यकालको लक्ष्य के हो?
मेरो लक्ष्य भनेको खेल क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने हो । पद्धति र प्रणालीलाई चुस्त–दुरुस्त पार्ने हो । पूर्वाधार निर्माण, खेलकर्मीको सम्मान, खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरुको सामाजिक मर्यादा बढाउनेजस्ता कामहरुलाई म प्राथमिकता दिनेछु । देशव्यापी रुपमा मान्छेको जीवनसँग खेललाई पनि जोड्ने वातावरण निर्माण गर्ने, ठूला–ठूला प्रतियोगिताहरु गर्ने, योग्यता र क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने हो । ‘स्कुल टू ओलम्पिक’ भनिएको छ, त्यसैले विद्यालय, कलेज, क्लब तथा विभिन्न संघ–संस्था, कर्मचारी, प्रशासनमा अधिकृतस्तरका व्यक्तिहरुलाई खेलकुदतिर आकर्षित गर्ने खालको खेल माहौल निर्माण नै मेरो लक्ष्य हो ।
यसका लागि कस्तो योजना बनाउनुहुन्छ ?
योजना थुप्रै छन् । योजना बनाउनु ठूलो कुरा होइन, तर योजना बनाएर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चाहिं ठूलो कुरा हो । १३औं सागको लागि नै भनेर पनि मैले योजनाहरु तयार गर्दैछु । साग सम्पन्न भइसकेपछि मेरो चार वर्षे कार्यकाल सकिने बेलासम्म मैले बनाएको अन्य योजना पनि पूरा गर्छु ।
चार वर्षे कार्यकालमा गर्नुपर्ने मुख्य कामहरु के–के हुन् ?
नेपाल फलानो–फलानो खेलको ‘पावरहाउस’ हो भनेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा चिनाउने हो । खेलकुदलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा आम जीवनसँग जोड्नका लागि काम गर्छौं । त्यसैको परिधिभित्र रहेर म कार्ययोजना बनाउंँछु र कार्यान्वयन पनि गर्छु ।
नेपाली खेलकुदमा कस्तो खालको समस्या छ ?
पहिलो कुरा त खेलकुद क्षेत्र उत्पादनशील छ भनेर जनमानसमा लैजान सकेका छैनौं । योजनाबद्ध र व्यावसायीकरणको विकास हामीले गर्न सकेका छैनौं । खेलकुदबाट नै राष्ट्रिय एकता बनाउन सकिन्छ भनेर आधार तयार पार्न पनि बाँकी छ । हामीसँग पूर्वाधारको कमी छ, तर बनेका पूर्वाधारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न सकेका छैनांै । हामीले ठूला–ठूला प्रतियोगिताहरु आयोजना गर्न सकेका छैनौं । नतिजा केन्द्रित खेलको पहिचान गरी त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनौं ।
यी सबै समस्याको समाधान गर्नसक्नु हुन्छ ?
खेलकुदको समस्या समाधान गर्ने नै म यो कुर्सीमा बसेको हुँ । यी सबै समस्या समाधान गर्न सक्दो प्रयास गर्नेछु ।
राखेपका करार तथा अस्थायी कर्मचारीहरुको स्थायी हुनुपर्ने मागलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
एक हजार दरबन्दी अहिले स्वीकृत भइसकेको छ । पाठ्यक्रम बनाइसकेपछि त्यसलाई लागु गरेर लोकसेवामार्फत् स्थायी दरबन्दीका लागि प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यसमा पहिलो पटक नसमेटिएकाहरु दोस्रो पटक समेटिने छन् । यसमा ३० प्रतिशत आन्तरिक र ७० प्रतिशत बाह्यलाई सामेल गराइनेछ । प्रशिक्षकहरुको हकमा भने मैले स्थायी नबनाउने नीति लिएको छु । प्रशिक्षकहरुसँग करारमा नै सम्झौता गरिनेछ ।
भनेपछि सबै प्रशिक्षकलाई करारमा नै राखिने हो ?
हिजो स्थायी भएका प्रशिक्षकहरुलाई यो लागु हुनेछैन । तर, अब लोकसेवाले पदपूर्ति गरेपछि प्रशिक्षकलाई भने स्थायी गरिने छैन । जोसँग योग्यता, कार्यदक्षता छैन, त्यस्ताले यति र उति वर्ष जागिर खाए भन्ने कुनै अर्थ रहँदैन । करार सम्झौता गर्दा ‘स्थायीको लागि दावी गर्ने छैन’ भन्ने एउटा वाक्य नै लेखिनेछ ।
प्रशिक्षकको हकमा मात्र किन यस्तो नीति लिनुभएको ?
प्रतिभावान खेलाडी उत्पादनमा प्रशिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले यसलाई सधैं चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्छ । त्यसैले काम गरेकै आधारमा प्रशिक्षकको मूल्याङ्कन गरिनेछ । काम गरे पनि नगरे पनि सबैले जागिर खाएकै भरमा स्थायी प्रक्रियामा जानुहुदैन । त्यसो ग¥यो भने पुरानालाई पनि झट्ट हेर्दा अन्याय भएजस्तो अनि नयाँले पनि न्याय नपाएजस्तो देखिन्छ । कामको आधारमा ‘रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट’ को नीति लिन्छु ।
यस प्रक्रियाले पूर्णता पाउन कति समय लाग्ला ?
पाठ्यक्रम निर्माण गर्न र पारित हुन एक महिनाजति लाग्छ । त्यसपछि लोकसेवा आयोगले आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्छ । करिब तीन महिना भित्रमा यसले पूर्णता पाउनेछ ।
खेल–संघहरूमा रहेको विवाद समाधान गर्न तपाईंको भूमिका कस्तो हुनेछ ?
नेपाली खेलकुदमा दुई खालका विवाद छन् । एउटा राखेपले रोपेको र अर्को खेल–संघभित्र नै सिर्जित विवाद । राखेपले अब विवाद रोप्ने छैन । त्यस्ता खालका कुनै पनि विवादको ठूलो विरोधी हुँ म । संघभित्र नै सिर्जित विवाद छ भने त्यसलाई समाधान गर्न म तत्पर छु । अहिलेको सन्दर्भमा संघमा खासै धेरै विवाद पनि छैन । धेरै संघको विवादहरु पनि सल्टिएका छन् । निकट भविष्यमा सबै संघमा रहेको विवादको अन्त हुनेछ भन्नेमा म आशावादी छु । यसो गर्दा नयाँलाई सिस्टमभित्र राख्न पनि मलाई सहज हुनेछ ।
क्यानको विवाद मिलाउने तपाईको योजना के हो ?
क्यानको विवाद मात्र होइन अन्य संघको विवाद मिलाउन पनि उत्तिकै तत्पर छु । यस्ता विवादलाई शून्य बनाउन म महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छु ।
तपाईको कार्यकालमा राखेप र नेपाल ओलम्पिक कमिटीबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनेछ ?
एक शब्दमा भन्नुपर्दा सुमधुर सम्बन्ध हुनेछ । नङ–मासुजस्तो । नेपाली खेलकुदको श्रीवृद्धिका लागि आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही इमानदारीका साथ मिलेर काम गर्छौं ।
१३औं साग तयारीलाई कसरी अघि बढाउनु हुन्छ ?
तयारीका लागि मुख्यतः तीनवटा कुराहरु छन् । पहिलो नम्बरमा पूर्वाधार निर्माण हो । कम्तिमा पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पूर्वाधार तयार पार्नु हो । दोस्रो खेलाडीहरुको प्रशिक्षणको कुरा हो । तेस्रो भनेको उद्घाटन अघिदेखि समापन नहुञ्जेलसम्मको कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउने हो । यी तीन वटै कुरालाई तीन फरक धारमा राखेर तयारी गरेको छु, र समयमा नै ती सबैको तयारी पूरा हुनेछ ।
पूर्वाधार निर्माणको काम सुस्त भएको हो ?
काम सुस्त छैन । विश्वका अन्य देशमा पनि ठूला प्रतियोगिता गर्दा तयारीको समय अलि लामो नै हुनेगर्छ । त्योसँग हाम्रो दाँज्ने हो भने तपाईंको कुरासँग म सहमत छु । हिजोको अवस्थामा निर्माणको गति जस्तो थियो त्योभन्दा अहिले बढेको छ ।
खेलस्थलको निर्माण कार्य सन्तोषजनक छ ?
सन्तोषजनक नै मान्छु । हामीसँग चार महिना बांँकी छ । त्यसअवधिभित्र पूर्वाधार निर्माणको सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुनेछ ।
मिति तीन पटक स¥यो, अब तोकिएकै मितिमा हुन्छ ?
साग सम्पन्न गर्न नसकिने भए त हामी सक्छौं भनेर मिति नै घोषणा गर्दैनौं नि । पहिला मैले सारेको होइन, अरुले सारेका हुन्, म चाहिं सार्दिनँ ।
सागका लागि चाँडो बजेट निकासा गर्न कस्तो पहल हुनेछ ?
बजेटको चिन्ता मेरो हो । यो चिन्ता मलाई नै लिन दिनुस् । यसलाई कसरी, कहिले ल्याउने त्यो मेरो जिम्मेवारीको कुरा हो । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, खेलकुदमन्त्री यस विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ । यस विषयमा पत्रकारहरुले धेरै चिन्ता गरिदिनु भयो, उहाँहरुलाई धेरै धन्यवाद । यत्ति भन्छु कि बजेटकै कारणले १३औं साग कुनै हालतमा रोकिने छैन ।
सागमा समावेश २७ खेलको स्थल टुंगो लागेको हो ?
टुङ्गो लागिसकेको छ । मसहित संघका पदाधिकारी र प्राविधिक सहितको टोलीले सम्पूर्ण खेलस्थलको निरीक्षण गरेर प्रारम्भिक रुपमा २७ खेलको खेलस्थल पक्का गरेका छौं । सोहीअनुसार खेलस्थलको मर्मत सम्भार, निर्माण र रंगरोहनको आवश्यक प्रक्रिया पनि अघि बढाएका छौं ।
सागमा समावेश २७ खेलहरु कहांँ खेलाइनेछ ?
काठमाडौं उपत्यकासहित पोखरामा खेलाइनेछ । अधिकांश खेल काठमाडौंमा सञ्चालन हुनेछन् भने महिला फुटबलसहित सात खेल पोखरामा हुनेछन् । ललितपुरको सातदोबाटोस्थित कराँतेको नवनिर्मित भवनमा कराँते र बक्सिङ तथा तेक्वान्दो भवनमा कुस्ती र तेक्वान्दोका खेलहरु सञ्चालन हुनेछन् । त्यस्तै, सातदोबाटो परिसरमै सुटिङ, पौडी, स्क्वास, टेनिसका खेलहरु सञ्चालन गरिनेछ । दशरथ रंगशालामा पुरुष फुटबलसहित एथ्लेटिक्सका अधिकांश स्पर्धाहरु सञ्चालन गरिनेछ । साइक्लिङका लागि जगडोलको शहीद पार्कलाई उपयोग गरिनेछ ।
त्रिपुरेश्वरस्थित कभर्डहलमा बास्केटबल र व्याडमिन्टन हुनेछ । लैनचौरको टेबलटेनिस हलमा टेबलटेनिस तथा मूलपानी र कीर्तिपुर मैदानमा क्रिकेट खेलाउने तय भएको छ । खोखो र कबड्डी काठमाडौंको भृकुटी मण्डपमा तथा गल्फ गोकर्ण गल्फ क्लबमा, उसु लगनखेलस्थित आर्मीको कभर्डहलमा सञ्चालन गरिनेछ । फेन्सिङको लागि खेलस्थलको टुङ्गो लाग्न बाँकी भए पनि पुलिसको निर्माणाधीन कभर्डहल सम्भावित खेलस्थल हुनसक्छ । त्यसको विकल्पमा आर्मीको कभर्डहल, भृकुटी मण्डप र त्रिपुरेश्वरको कभर्डहललाई सम्भावित खेलस्थलको रुपमा प्रयोग गरिनेछ । त्यस्तै, पोखरा रंगशलामा महिला फुटबल सञ्चालन गरिनेछ । रंगशालाको कभर्डहलमा आर्चरी, भलिबल, ह्याण्डबलका स्पर्धाहरु हुनेछन् भने पोखराको सभागृहमा भारत्तोलन, फेवातालमा ट्रायथलन र प्याराग्लाइडिङका खेलहरु सञ्चालन हुनेछन् ।
सागमा समावेश खेलको तयारी कसरी हुँदैछ ?
पदकका लागि सबै खेलको स्वभाव एउटै छैन । पदकको अधिक र न्यून सम्भावना भएका खेललाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेर तयारी थालेका छौं । ती दुवैमा लगानी ढाँचा एउटै हुनुहुँदैन । रिजल्ट ओरिएन्टेड खेलमा गरिने लगानी र नन् रिजल्ट ओरिएन्टेड खेलमा गरिने लगानीमा भिन्नता छ । कुनै खेल बन्द शिविर प्रशिक्षण सुरु भएदेखि नै विदेशमा छन् । कुनैको पहिलो स्टेज नेपालमा र त्यसपछि विदेश जाने योजनामा छ भने कुनैको फाइनल स्टेज विदेश लैजाने योजना छ । त्यस्तै कुनैमा विदेशी प्रशिक्षक झिकाएर अन्तिमसम्म नेपालमा नै तयारी गर्ने योजना छ भने कुनैको नेपाली प्रशिक्षक नै पर्याप्त हुन्छ भन्ने छ ।
केही खेलले आवश्यक सामग्रीको अभाव र प्रशिक्षणस्थल अनुकूल नभएको गुनासो गरेका छन्, के भन्नुहुन्छ ?
खेल संघको पनि केही जिम्मेवारी र दायित्व हुन्छ । संघका पदाधिकारी पद ओगटेर मात्र बस्नका लागि होइनन् । संघले आफ्नो खेल कहाँ कसरी खेलाउने हेक्का राख्नुपर्छ । राखेपले उपलब्ध गराएको स्थान प्रयोग गर्न नमान्ने अनि प्रशिक्षणस्थल अभाव भएको भन्दै हल्ला फिजाउनु सरासर गलत कुरा हो । यस्तो कुराको गुनासो गर्नुभन्दा पनि राखेपसँग समन्वय गर्दा समाधान निस्कन्छ । यदि कसैले गलत कुराको हल्ला चलाउँछ भने त्यस्ता संघ वा पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण माग्नसमेत म तयार छु ।
सागभन्दा अघि खेल संघको चुनाव रोकिन्छ ?
यदि सागमा समावेश २७ खेलका संघमध्ये कुनैको चुनाव गर्ने समय आएमा मात्र चुनाव नगराउने भनेको हुँ । त्यो बाहेकको खेल संघलाई भने चुनाव गर्न रोकतोक छैन । ती २७ खेलमध्ये कुनैको चुनाव रोकिंदा अप्ठ्यारो पर्छ भने समयावधि बढाउने अधिकार मसँग छ ।
यस्तो गर्नुको कारण ?
प्रमुख कारण भनेको खेल संघमा विवाद नआओस् भन्ने नै हो । जसका कारण सागको तयारीमा असहज वातावरण सिर्जना नहोस् भनेर हो । संघका अन्य व्यक्तिका कारण साग तयारीमा रहेका प्रशिक्षक र खेलाडीमा कुनै प्रकारको फाटो अथवा नकारात्मक प्रभाव नपरोस् भन्ने चाहन्छु । खेलकै हितको निम्ति मैले यस्तो गर्ने भनेको हो, तर त्यो सागसम्मका लागि मात्र हो ।